ရင်ပြင်တော်ပေါ်မှာ ထီးတွေ၊ လူမျက်နှာတွေ။
အလဲဗင်းသတင်းဂျာနယ်မျက်နှာဖုံးပေါ်က မျက်နှာပြည့်ဓါတ်ပုံက ကျနော့်ကိုဖမ်းစားလိုက်တယ်။
ဓါတ်ပုံကိုလည်း သပ်သပ်ဖြတ်ထုတ်ပြီး သိမ်းလိုက်တယ်။ နောက် ဒက်စတော့ပေါ်တင်ထားလိုက်တယ်။
ကဗျာရေးမလား။ ဟင့်အင်း။ စကားလုံးတွေထက်တခုခုကို ပိုအာသီသဖြစ်နေမိတယ်။
တနေ့ကကြည့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ဇာတ်လိုက်ကလူသတ်သမား။ မွေးရာပါသူ့ထူးခြားချက်တခုကြောင့် လူမသတ်ချင်ပဲသတ်ရ။ တယောက်သတ်ပြီးတိုင်း သူ့မှာနာကျင်ကြေကွဲရ။ သူ့ခန္ဒာကိုယ့်လှုံ.ဆော်လာတဲ့အခါ လူသတ်လိုက်ရမှ သူ့မှာလူကောင်းပြန်ဖြစ်၊ ပြန်ကျန်းမာ။ ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ သူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အရည်အသွေးကို အသုံးပြုပြီး လူတွေကိုထူးချွန်စွာကယ်တင်တဲ့ ဆရာဝန်ဘ၀။
သူ့ချစ်သူကသူ့လျို့ဝှက်ချက်ကိုသိသွားတဲ့အချိန်မှာ သူ့ခန္ဒာကိုယ်က သူ့ကိုလူသတ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတဲ့အချိန်။
ချစ်သူရဲ့နားလည်မှုကိုမရပဲ ရွံရှာမုန်းတီးမှုကိုသာ နာကျင်စွာလက်ခံလိုက်ရတဲ့အဖြစ်။
သူ့ဝေဒနာက ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတိုင်း ဝေဒနာသက်သာရာသက်သာကြောင်း အခန်းအောင်းပြီး ဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီကားတွေ၊
မျဉ်းတွေနဲ့ချည်းဖွဲ့စည်းထားတယ်။ အပ်ချည်လုံးတလုံးကို ဖြည်ချပြီး ဖြန့်ပုံထားသလို ရှုတ်ထွေးပြီးနားလည်ရခက်တဲ့မျဉ်းတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတယ်။
ကျနော်လည်း မျဉ်းကြောင်းတွေကိုချစ်တတ်တာ သွားသတိရမိတယ်။
သူ့ကိုယ်ပိုင်ဟန်တခုနဲ့ ပန်းချီဆရာဘ၀ကိုရပ်တည်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်က ပြောခဲ့ဘူးတယ်။
ပုံဆွဲတတ်မှမဟုတ်ပါဘူး။ ဖန်တီးလိုစိတ်နဲ့ ခံစားမှုရှိရင် ပန်းချီဆွဲလို့ရပါတယ်တဲ့။
အဲဒီစကားကိုသတိရမိလိုက်တာနဲ့ပဲ စာရွက်အဖြူတရွက်နဲ့ ဘောပင်တချောင်းကို ကျနော်ကောက်ကိုင်လိုက်တယ်။
Posted by wai lin Tun at 12:33 AM Labels: စိတ်ကူးဆေးစက်
aw, i should type here. instead, i sent you an email. anyway, i here do it again.
as i have trouble in typing zawgyi font, pardon me for typing in english.
though i don't know what's all this about. it's good to read.